(Finland မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
Suomen tasavalta (ဖင်လန်ဘာသာ)
Republiken Finland (ဆွီဒင်ဘာသာ)
နိုင်ငံတော် သီချင်း: ကျွန်ုပ်တို့၏ နိုင်ငံ(Maamme)(ဖင်လန်ဘာသာ)
ကျွန်ုပ်တို့၏ နိုင်ငံ (Vårt land) (ဆွီဒင်ဘာသာ)
Roma (Gypsy) 0.1%
ဆောင်လီနီနီဆတိုရ် (Sauli Niinistö)
မာရီ ကီဗီနီယယ်မီ (Mari Kiviniemi)
• ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်နိုင်ချိန်
၁၈၀၉ မတ်လ ၂၉ ရက်
• လွတ်လပ်ရေး ရချိန်
၁၉၁၇ ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက်
၁၉၁၈ ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက်
၃၃၈,၁၄၅ km² (၁၃၀,၅၅၈ sq mi) (အဆင့်: ၆၅)
၅,၃၁၈,၁၉၆ (၂၀၀၈) (အဆင့် - ၁၁၁)
ရ၅/km²(၁၉၃/sq mi) (အဆင့် - ၁၁၉)
၁၈၅,၉၇၉ ဘီလီယံ (အဆင့် - ၅၂)
US $၃၄,၈၁၉ (အဆင့် - ၁၂)
အလွန်မြင့် · ၂၂
ယူရို (EUR "€")
ပြည့်ဝသည့် ဒီမိုကရေစီ အုပ်ချုပ်မှုစနစ် ကျင့်သုံးပြီး၊ ဟယ်လ်စင်ကီ မြို့တော်တွင် တည်ရှိသည့် ပါလီမန်အမတ်များ နှင့် မြို့အုပ် ၄၁၅ခုဖြင့် အုပ်ချုပ်သည့် နိုင်ငံဖြစ်သည်။ လူဦးရေ တစ်သန်းသည် ဟယ်လ်စင်ကီမြို့တော်ကြီးတွင် နေထိုင်ကြပြီး (၎င်းသည် ဟယ်လ်စင်ကီ၊ အက်စ်ပို၊ ဗန်တာ နှင့် ကူးနီအိုင်နန် တို့ဖြင့် ပေါင်းစည်းဖွဲ့ထားသည်) ၊ နိုင်ငံ၏ ထုတ်ကုန်များ၏ သုံးပုံသည် ထိုမြို့များမှ ဖြစ်သည်။ အခြား မြို့ကြီးများသည် တမ်ပယ်ရယ်၊ တူးရ်ကူ နှင့် အုံးလူ မြို့တို့ ဖြစ်ကြသည်။
သမိုင်းတလျှောက်တွင် ဆွီဒင် နိုင်ငံ၏ လက်အောက်တွင် ရှိခဲ့ပြီး၊ ၁၈၀၉ ခုနှစ်တွင် ရုရှား အင်ပါယာ ၏ ထိမ်းချုပ်မှုအောက်တွင် ရှိခဲ့သည်။ ရုရှားလက်အောက်မှ ၁၉၁၇ ခုနှစ်တွင် လွတ်လပ်ရေး ရခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် ဆိုဗီယက် ယူနီယံသည်၊ ဂျာမဏီ နိုင်ငံ၏ နာဇီ နှင့် စစ်ဆင်နေပြီး၊ စစ်အေးကာလကြီးအတွင်းတွင် လွတ်လပ်ရေးရခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံအဖြစ် ၁၉၅၅ ခုနှစ်တွင် အသင်းဝင်ခဲ့ပြီး၊ ဥရောပ သမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဖြစ် ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် အသင်းဝင်ခဲ့သည်၊ ၎င်းသည် ယူရိုဇုန် ဟုခေါ်ဝေါ်သော ဥရောပမြေအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံထားရသည့် နိုင်ငံဖြစ်သည်။ လှုမှုဖူလုံရေး၊ စီးပွားရေး ၊ နိုင်ငံရေး၊ စစ်တပ်မှ နိုင်ငံ့အာဏာ အလွဲသုံးစားလုပ်မှုများ အား လေ့လာစစ်ဆေး အတည်ပြုထားသည့် စာတမ်းများအရ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများတွင် နံပါတ် ၂ အတည်ငြိမ်ဆုံး နိုင်ငံအဖြစ် ခေါ်ဝေါ်ခံရသည်။
ဖင်လန် သည် နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံများနှင့် ယှဉ်လျှင်၊ နည်းပညာ တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်မှု၊ အများပြည်သူအတွက် ပညာရေးအစီအစဉ်များ၊ နိုင်ငံမှ ထုတ်ကုန်များ တိုးတက်လာမှု နှင့် လူ့အခွင့်အရေး လွတ်လပ်မှုများကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်းများဖြင့် အကောင်းဆုံး နိုင်ငံများ စာရင်းတွင် အမြဲတွေ့ရှိလေ့ ရှိသည်။ စိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သော်လည်း၊ စက်မှုလက်မှု နိုင်ငံများအဖြစ်သို့ ၁၉၅၀ အလွန်မှသာ စတင်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုများ တရှိန်ထိုးဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြီး၊ အထူး သက်သာချောင်ချရေး နှင့် လူမှုရေးအဓိကထားသည့် နိုင်ငံတစ်ခုအသွင်ပြောင်းနိုင်ခဲ့ပြီး၊ ကမ္ဘာ့အရှေ့ နှင့် အနောက် စီးပွားရေးနှင့် နိုင်ငံရေး မတည်ငြိမ်မှုများ အကြားတွင် အဆင်ပြေစွာရပ်တည်နိုင်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံ၏ ဖန်တီးနိုင်မှုစွမ်းအားသည် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများနှင့်ယှဉ်လျှင် အမြဲထိပ်ပိုင်းတွင် တွေ့ရှိရသည်။ ဖင်လန်သည် ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် Newsweek စစ်တမ်းအရ၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ နိုင်ငံရေး ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေ နှင့် လူနေမှုအဆင့်အတန်း အရေအသွေးပေါ် မူတည်ကာ ဗိုလ်ဆွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတွင် ဒုတိယ အတည်ငြိမ်ဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်လည်း အမည်ရခဲ့ပြီး၊ ၂၀၀၉ လီဂတမ် ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု အမှတ်ပေးစာရင်းတွင်လည်း ပထမရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖော်ရမ် မှ ဖင်လန်နိုင်ငံအား ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးပြိုင်ဆိုင်မှု နိုင်ငံများတွင် အဆင့် ၇ နေရာပေးခဲ့သည်။ ပညာရေးတွင် ပညာဘွဲ့ရရှိသူဦးရေ အများဆုံးအဖြစ် အဆင့် ၃တွင် ရှိခဲ့ပြီး၊ OECD Factbook 2010 ၏ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများရှိ ဘွဲ့ရရှိသူများ၏ ပုံမှန်အသက်၊ နိုင်ငံရှိလူဦးရေရာခိုင်နှုန်းပေါ်မူတည်ကာ စစ်တမ်းကောက်ယူအမှတ်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။လက်ရှိတွင် ဖင်လန်နိုင်ငံအား ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများတွင်ငြိမ်းချမ်းခြင်း၊ ပြိုင်ဆိုင်နိုင်မှု အားကောင်းခြင်း၊ နေထိုင်ရန် သင့်တော်ခြင်းများဖြင့် ထိပ်ဆုံးနိုင်ငံများတွင် တွေ့ရှိနိုင်သည်။ 
ဆူအိုမီ (Suomi) ဆိုသည့် အမည် ဘယ်ကဖြစ်ပေါ်လာသည်မှာ မသေခြာသော်လည်း၊ ရစ်မြစ်တူသည့် ဝေါဟာရတစ်ခုမှာ ပရို-ဘဲလ်တစ် စာလုံးဖြစ်သည့် ဇဲမဲ*zeme, သည် မြေဟု အဓိပ္ပါယ်ထွက်သည်။ ဖင်လန်ဘာသာ စကားနှင့် နီးစပ်သည့် (the Baltic-Finnic languages) အခေါ်အဝေါ်ကို Baltic languages Latvian နှင့် Lithuanian တို့တွင် တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ၎င်းအပြင် အင်ဒို-ယူရိုပီရမ် စကားလုံးဖြစ်သည့် *gʰm-on"man"(cf. Gothic guma, Latin homo)တို့မှ ဆင်းသက်လာသည်ဟု ပြောနိုင်ပြီး၊ *ćoma အဖြစ် ငှားရမ်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုစကားလုံးသည် Finland Proper နယ်မြေကိုသာ သက်ရောက်ခြင်းရှိပြီး၊ များမကြာမီ Gulf of Finland ၏ မြောက်ပိုင်းကန်းရိုးတန်း၊ မြောက်ပိုင်းမြေဖြစ်သည့် Ostrobothnia သည် ထိုအချိန်တွင် ၁၈ ရာစုအထိ မပါဝင်သေးခြေ။ အစောပိုင်း ယူစချက်များတွင်လည်း suomaa (fen land) သို့ suoniemi (fen cape) ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ဆားမယ် saameလူမျိုးများ (Sami,anon-Finnish people in Finland) နှင့် ဟာမယ် လူမျိုးများအကြားHäme (a Finnish people andaprovince) နှိုင်းယှဉ်ချက်များမှ ဖြစ်ပေါ်လာသည်ဟုဆိုသော်လည်း၊ ယခုအခါတွင် ၎င်းယူစချက်များ အကျုံးမဝင်တော့ဟုဆိုသည်။
အနုဇီဝလေ့လာမှုများ၏ သက်သေအထောက်အထားများအရ၊ ဖင်လန်နိုင်ငံ၏ မြေအရင်းအမြစ်သည် လွန်ခဲ့သည့် ရေခဲကျောက်ခေတ် ဘီစီအီး ၈၅၀၀ ခန့် ၊ နောက်ဆုံး ရေခဲကျောက်ခေတ် ရှိ ရေခဲများပျော်သွားချိန်မှ စတင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ပထမဦးဆုံးနေထိုင်ခဲ့သူများ၏ ကျန်ရစ်ခဲ့သော artifacts ထူးခြားသော လက္ခဏာများကိုကြည့်လျင် အက်စ်တိုနီးယား၊ ရုရှား၊ နော်ဝေ နိုင်ငံများ နှင့် ဆက်နွယ်နေသည်။ အစောဆုံးနေထိုင်သွားသူများမှာ တောလိုက် မုဆိုး များ ဖြစ်ပြီး၊ ကျောက်ကို လက်နက်အဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
လူအများဆုံး ထွက်ခွာမှု အသုံးပြုသည့် နေရာမှာ ဟယ်လ်စင်ကီ-ဗန်တာ လေယာဉ်ကွင်းဖြစ်ပြီး ၂၀၀၈ခုနှစ်တွင် အသုံးပြုသူ ၁၃သန်းရှိသည်။အုံးလူ လေယာဉ်ကွင်း သည် နိုင်ငံ၏ လေယဉ်ကွင်းပေါင်း ၂၅ ခုအနက် ဒုတိယ အကြီးဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် နေရာဖြစ်သည်။ဟယ်လ်စင်ကီ-ဗန်တာတွင် အခြေချကြသည့် လေကြောင်းလိုင်းများမှာ ဖင်းန်အဲ, ဘလူး၁ နှင့် ဖင်းန်ကွန် လေကြောင်း တို့သည် နိုင်ငံတကာ နှင့် ပြည်တွင်းလိုင်းများကို ချိတ်ဆက်ပေးထားသည်။ပြည်တွင်းသို့ သက်သာချောင်ချိသည့် လေကြောင်းလိုင်းများဖြစ်သည့် နော်ဝေဂျီယံ၊ ဘော့လ်တစ်အဲ နှင့် တမ်ပယ်ရယ်မြို့ အခြေစိုက်ရွိုင်ရန် အဲ တို့လည်းရှိသည်။ ဟယ်လ်စင်ကီသည် အနောက် ဥရောပ နှင့် အရှေ့လွန်ဒေသများသို့ ပို၍ နီးစပ်သည့် စက်ဝိုင်းအတွင်းတွင်ရှိသည်။
နိုင်ငံရှိမြေ ၇၇ရာခိုင်နှုန်းသည် သစ်တော်ရှိပြီး(အများအားဖြင့် ခုတ်ပြီးပြန်စိုက်အပင်များ) ရှိသောကြောင့် ၊ စာရွက်ချော နှင့် စာကြမ်း၊ သစ်လုံး ထွက်ကုန်များသည်။ စာကြမ်း နှင့် စာနု ထုတ်လုပ်မှုများတွင် (Ahlstrom, M-real, UPM) စသည့် ကုမ္ပဏီကြီးများ ရှိသည်။
ဦးလယ် (YLE)၊ ဖင်လန် နိုင်ငံပိုင် ရုပ်သံလွှင့်ဌာနဖြစ်ပြီး၊ ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်း ၅ လိုင်း နှင့် ရေဒီယိုလိုင်းပေါင်း ၁၃ လိုင်းကို ရုံးသုံး ဘာသာဖြစ်သည့် ဆွီဒင်နှင့် ဖင်လန်ဘာသာ နှစ်မျိုးလုံးဖြင့် ထုတ်လွှင့်သည်။ ဦးလယ်သည် တီဗွီလက်ဝယ်ရှိကြသူများ မပေးမနေရ အခွန်ဆောင်ရသည့် ငွေကြေးများ နှင့် စီးပွားဖြစ် ထုတ်လွှင့်သူများဆောင်ကြရသည့် အခွန်ငွေများဖြင့် ထုတ်လွှင့်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ရုပ်မြင်သံကြား နှင့် မီဒီယာ အခွန်မှာ အသုံးပြုသူဖြစ်လျင် နှစ်စဉ် ၂၅၂.၂၅ယူရိုဖြစ်ပြီး၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှစ၍ လိုက်လံကောက်ယူခြင်းမပြလုပ်ဘဲ၊ ပြည်သူများ အခွန်ငွေ ပေးဆောင်ရသည့် အခွန်ကြီးကျပ်ရေးဌာနမှ တိုက်ရိုက်ကောက်ယူမည်ဖြစ်သည်။
ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းအားလုံးသည် ဒီဂျီတယ်စနစ်ကို အသုံးပြုပြီး၊ ကြိုးဖြင့်လည်းကောင်း ၊လေလိုင်းဖြင့်လည်းကောင်း ချိတ်ဆက်ထားကြသည်။ စီးပွားဖြစ် ချန်နယ်ဖြစ်သည့် အမ်တီဗွီ၃( MTV3)၊ ရေဒီယို နိုဗာ တို့ကို နော်ဒစ်ထုတ်လွှင့်ရေးကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် (Bonnier and Proventus Industrier)မှ ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ Fox International Channels (FIC) သည် 20th Century Fox Studios တို့၏ ညီအမ ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး၊ ကြည့်ရှုသူနည်းပါးသည့် ဆူအီမီတီဗီအား ဝယ်ယူကာ ၁၆ ရက် ၄ လ ၂၀၁၂ မှ စတင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ အခကြေးငွေ ပေးဆောင်ကာ ကြည့်ရှုရသည့် ကေဘယ်လိုင်း ဆီအန်အန်သည်လည်း၊ အခမဲ့ရုပ်သံလိုင်းအဖြစ် ထုတ်လွှင့်နိုင်ရန် လျှောက်ထားရာတွင် အကြိမ်ကြိမ်ပယ်ချခံခဲ့ရသော်လည်း နောက်ဆုံးတွင် ထုတ်လွှင့်ခွင့်ရရှိခဲ့သည်။
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named imf2
↑ The World's Best Countries. A Newsweek study of health, education, economy, and politics ranks the globe's top nations, Newsweek, Aug 2010။ Newsweek.com (2010-08-16)။ 2010-08-26 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဖင်လန်နိုင်ငံ&oldid=683308" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၃:၂၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။